Zvekare, Zvezvino, uye Ramangwana reKushambadzira Pamhepo | Martech Zone
Chishanu, February 14, 2014 Mugovera, Kukadzi 15, 2014 Douglas Karr
Chimwe chezvinhu zvinonakidza zvekushanda mune nyowani nyowani ndezvekuti maturusi edu uye kugona kuri kufamba nekukurumidza sekuvandudza kwehardware, bandwidth uye mapuratifomu. Mwedzi mizhinji yapfuura, apo yaishanda muindasitiri yemapepanhau, zvaive zvakaoma kuita kuyera kana kufanotaura mitengo yemhinduro pane kushambadza. Isu takakunda kwese kuyedza nekungokanda manhamba akawandisa pairi. Iyo yakakura kumusoro kweye faneli, zvirinani pasi.
Dhatabhesi kushambadzira yakarova uye isu takakwanisa kusanganisa ekunze maitiro, mutengi uye demographic dhata kuti zvirinani tarise kuedza kwedu. Nepo basa racho rakanga rakanyatsojeka, iyo nguva yaakatora kuyera mhinduro yaive yakaoma. Kuyedza uye kugadzirisa kwaifanirwa kutangidza iwo mushandirapamwe uye kunonoka kuyedza kwekupedzisira kunyangwe. Zvakare, isu taivimba nekoponi kodhi kunyatso tarisa shanduko dhata. Vatengi vedu vaiwanzo kuwona kusimudzira mukutengesa, asi kwete nguva dzose vachiona makodhi akashandiswa saka chikwereti chaisawanzo kupihwa kwachinofanirwa.
Chikamu chazvino chekushambadzira kwekuedza kwemakambani mazhinji mazuvano ari akawanda-chiteshi kuedza. Zvinotaridza kuomera vatengesi kuenzanisa maturusi uye macampaign, dzidza maitiro ekuvagona, wozoyera mhinduro dzemuchinjiko. Nepo vashambadziri vachiziva kuti dzimwe nzira dzinobatsira vamwe, isu tinowanzo hanya neyakaenzana chiyero uye kudyidzana kwematanho. Ndatenda kunaka kuti mapuratifomu akaita seGoogle Analytics anopa kumwe kuwanda-chiteshi kutendeuka kutaridzika, kupenda mufananidzo wakajeka wezvekutenderera mabhenefiti, muchinjikwa mabhenefiti, uye kuzadza mabhenefiti eakawanda-chiteshi mushandirapamwe.
Zvinonakidza kuona makambani akakurisa munzvimbo yakaita seMicrosoft, Salesforce, Oracle, SAP, uye Adobe ichitenga zvine hukasha zvekushambadzira maturu mukati mezvimbo. Salesforce naPardot, semuenzaniso, mubatanidzwa unonakidza. Izvo zvinongonzwisisika kuti yekushambadzira otomatiki sisitimu yaizoshandisa CRM dhata uye kutyaira hunhu dhata kudzoka kwairi kuitira kuvandudza kuchengetwa uye kutora kwevatengi. Sezvo aya maratidziro ekushambadzira anotanga kuumbana zvisina kugadzikana, ichave ichipa rukova rwechiitiko icho vatengesi vanogona kugadzirisa pane iyo nhunzi kukwira nekudzika spigot munzira dzavanoshuvira. Izvo zvinonakidza kufunga nezvazvo.
Tine nzira dzakawanda dzekuenda, zvakadaro. Mamwe makambani anoshamisa atove nechisimba kuchinja shanduko analytics mamodheru ayo achapa data chairo rekuti shanduko mune imwe chiteshi inokanganisa sei shanduko dzese. Multi-chiteshi, fungidziro analytics ichave yakakosha kune yega yega mushambadzi turikiti kuitira kuti vanzwisise kuti sei uye nzira yekushandisa imwe neimwe yezvishandiso mukati mayo.
Parizvino, isu tichiri kushanda nemakambani mazhinji ari kunetseka. Kunyange isu tichiwanzogovana nekukurukura zvakakwenenzverwa mushandirapamwe, makambani mazhinji achiri kunyorera batch uye kuputika mishandirapamwe yevhiki nevhiki pasina maitiro, pasina zvikamu, pasina zvinokonzeresa, uye pasina akawanda-nhanho, akawanda-chiteshi madrip ekushambadzira. Muchokwadi, mazhinji emakambani haana kana email iyo iri nyore kuverenga pane mbozhanhare.
Ini ndinotaura nezveemail sezvo iri iyo linchpin yeese online yekutengesa zano. Kana iwe uri kutsvaga, iwe unoda vanhu kuti vanyore kana ivo vasiri kuzoshandura. Kana iwe uri kuita zvemukati marongero, iwe unoda vanhu kuti vanyore kuitira kuti iwe ugogona kuvaita kuti vadzoke. Kana iwe uri kuita chengetedzo, iwe unofanirwa kuenderera uchipa kukosha nekudzidzisa uye kutaurirana nevatengi vako. Kana iwe uri pane vezvenhau, iwe unofanirwa kugamuchira zviziviso zvekuita. Kana iwe uri kushandisa vhidhiyo, iwe unofanirwa kuzivisa vateereri vako kana iwe uchitsikisa. Ndichiri kushamiswa nenhamba yemakambani asina email inoshanda.
Saka tiri kupi? Iyo tekinoroji yawedzera uye iri kufamba nekukurumidza kupfuura kutorwa. Makambani anoenderera mberi nekutarisa pakuzadza fanera pachinzvimbo chekucherechedza nzira dzakasiyana dzekuita izvo vatengi vanotora. Vatengesi vanoramba vachirwira zvikamu zvebhajeti remushambadzi izvo vangangokodzera kupihwa muchinjiko-chiteshi kukanganisa kwepuratifomu yavo. Vatengesi vanoramba vachirwira nehunhu, hunyanzvi, uye zviwanikwa zvemari zvavanoda kuti vabudirire.
Tiri kusvika ikoko, zvakadaro. Uye masisitimu ari kuvambwa nemakambani makuru uye zvaari kuda zvichatibatsira kufambisa tsono zvinobudirira, zvinobudirira, uye nekukurumidza.
Kukadzi 14, 2014 na10: 27 PM
Mune maonero angu, ndinofunga kuti mabhizinesi anofanirwa kubata kudyidzana kwese senzvimbo yekusangana nevateereri vavo. Zvichitaurwa zviri nyore, haasi ese magero akafanana uye imwe neimwe inounza rudzi rwakasiyana rwechiitiko. Chikanganiso chikuru ndechekutumira kwese kwese pasina meseji yakabatana kana yakaipisisa, kwete kuendesa kukosha kuchapa vatengi vako simba.
Feb 15, 2014 at 10:17 PM
@seventhman: disqus yakasimba poindi. Kubatana pasina kunzwisisa kuti sei uye nei mushandisi ari pachigadzirwa kana skrini yavari haina kunyanya kukura. Ini ndinozviona ne Twitter ne Facebook. Kunyangwe isu tichitsikisa uye tichisimudzira pane yega yega, Facebook iri yakawanda yekukurukurirana nepo Twitter iri yakawanda yebhodhi remashoko.
Feb 15, 2014 at 9:33 PM
Great post! .. Kutenda nekugovana Doug! ..
@ treb072410: disqus Zvakawanda zvinokosheswa!
Jun 14, 2017 pa 2: 21 PM
Ndatenda nekugovana tho… ndawana izvi zvichibatsira